Middlebury ကောလိပ်ကျန်းမာရေးစင်တာ၏ဒါရိုက်တာ Dr. Mark Peluso မှ ED တိုးတက်မှုနှုန်းကိုမြင်သည်။ porn ကိုအပြစ်တင်သည် (2012) - Your Brain On Porn
PDF သို့လင့်ခ် - Parton ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခန်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်မြင့်တက်ရှုမြင်
Saadiah Schmidt ကအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ Thu, 05 / 03 / 2012
နောက်ဆုံးသုံးနှစ်ကြာဒါရိုက်တာနှင့်ကောလိပ်သမားဒေါက်တာမာ့ခ် Peluso သည်နှင့်အညီ, Parton ကနျြးမာရေးစင်တာ၌ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အခြားလိင်-related ပြဿနာများကိုသတင်းပို့အထီးကျောင်းသားအရေအတွက်တစ်ခုမျာထည်းထည်းမျက်မြင်ပါပြီ။
"သူတို့ကတစ်ဦးစိုက်ထူရသို့မဟုတ်တစ်အမျိုးသမီးအဖော်နှင့်အတူတစ်စိုက်ထူထိန်းသိမ်းရန်မရဘူး" ဟု Peluso ကဆိုသည်။ "သူတို့ကသူတို့ Viagra လိုအပ်ပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ "
ပုံမှန်ရုံးအလည်အပတ်ခရီးခုနှစ်, Peluso မေးခွန်းများကိုသူ့လူနာတစ်ဦးစီးရီးကိုမေးပါလိမ့်မယ်: သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖို့ဆွဲဆောင်ပါသလား? သငျသညျရငျးနှီးဖြစ်ပါသလား သင်တစ်ဦးလိင်ဟန့်တားဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခွအေနေရှိပါသလား သငျသညျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအယှက်ထိုကဲ့သို့သောအရက်အဖြစ်တ္ထုများ, အသုံးပြုနေသလား သင်သည်အခြားလူတို့အားဆွဲဆောင်ခံစားရပါသလော Peluso အဆိုအရ, ဤမေးခွန်းများကိုအားလုံးကိုအဖြေကို "မ။ " များသောအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်
သို့သျော "ရောဂါအများစုအတွက်လူနာညစ်ညမ်း၏လေ့ကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်, သူတို့သည်နေကြ၏တဲ့အခါမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမအခက်အခဲရှိခဲ့ပါတယ်," Peluso ကဆိုသည်။
porn အသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင်သကဲ့သို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမလုံလောက်ပြုပါ - အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း၏တိုးမြှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုသတိပြု, Peluso porn နှင့်အာနိသင်အကြားတစ်ဦးပြောင်းပြန်ကြားဆက်ဆံရေးအကြံပြုထားသည်။
Parton ကျန်းမာရေးစင်တာတွင် Laurel Kelliher မှာအကြီးတန်းသူနာပြု Practitioner မကြာခဏသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက် '' erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် ပတ်သက်. အမျိုးသမီးကျောင်းသားများအားဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
"ကျွန်မကပိုပြီးထင်ရှားတဲ့ခဲ့, နှစ်ပေါင်း၏နောက်ဆုံးစုံတွဲအတွက်ပြောချင်," Kelliher ကဆိုသည်။ သူမလည်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကအဓိကအချက်တစ်ချက်ကယုံကြည်သည်နှင့်၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုကြဉ်ရှောင်ဖို့သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်အားပေးဖို့အမျိုးသမီးတွေကိုအကြံပေး။
Peluso နှင့် Kelliher နှစ်ဦးစလုံး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်အကူအညီရှာသောလူနာအများစုဆက်ဆံရေးစတင်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွင်ဖော်ပြသည်။
"ငါသည်နှစ်ဦးစလုံးကိုမြင်ရပေမယ့်ပိုပြီးမကြာခဏလူတွေပဲကျပန်း hookups ထက်ဆက်ဆံရေး၌ရှိကြ၏," Kelliher ကဆိုသည်။
အမျိုးသားများအတွက် "သူတို့ Viagra လိုခငျြသောကွောငျ့အတွက်လာ," Peluso ကဆိုသည်။ "သူတို့ကတစ်ဦးအမျိုးသမီးအဖော်နှင့်အတူဖြစ်မယ့်တစ်ဦးရည်းစားသွားရောက်ကြည့်ရှုမယ့်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအသစ် စတင်. နှင့် [သူတို့ရဲ့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု] အကြောင်းကိုမကောင်းတဲ့ခံစားရနေကြတယ်။ "
"သင်မလုံလောက်ခြင်းနှင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခံစားရတယ်" erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေခံစားခဲ့ရခဲ့သူတစ်ဦးအထီး sophomore ကဆိုသည်။ "ဒါဟာအလွန်အဆင်မပြေခွအေနကေိုပါပဲ။ "
ဒါကြောင့်ယောက်ျားဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါသော်လည်းအဆင်မပြေ, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအဖြစ်ကောင်းစွာအမျိုးသမီးတွေသာသက်ရောက်သည်။
"သင်အလိုအလြောကျ [erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု] သင်၏အမှားကြောင်းယူဆ" ဟုအမျိုးသမီး sophomore "သည်သင်တို့အားယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုသောကြောင့်ထိုသို့မဆိုအသိလုပ်မထားဘူးသော်လည်း" ဟုပြောသည်။
အပြစ်တင်ဖို့ porn ဘာလဲ
"အတိအကျယန္တရားဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူး," Peluso ကပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်လေ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအယှက်သောဦးနှောက်ထဲမှာ neuroadaptive အပြောင်းအလဲများရှိပါလိမ့်မယ်။ "
Peluso သုတေသီများ naltrexone နှင့်အတူအင်တာနက်ကိုလိင်စွဲကုသရသောလေ့လာမှုတစ်ခုထောက်ပြသည်။ သူတို့ကဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine နှင့်အခြား neurotransmitters မူးယစ်ဆေးစွဲဆင်တူတဲ့ထုံးစံ၌လေ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုထိခိုက်စေခြင်းငှါတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အီတလီဆီးရောဂါပါရဂူ Carlo Foresta သူညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားခိုင်မာသော link ကိုတွေ့ရှိရသည့်အတွက်တစ်ဦး 2011 လေ့လာမှုထွက်သယ်ဆောင်။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေခံစားခဲ့ရသူလေ့လာမှုမှာယောက်ျား၏ခုနစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကိုပုံမှန်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကို ရှိ. , အင်တာဗျူးတွေအမှန်တကယ်ပုံကဒီထက်ကြီးကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည် "အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းကိုလူပျိုတို့ရဲ့ခေါ်ဆောင်သွားပညာရှိများ၏ Hyper-ဆွနဲ့ ... desensitization စေပါတယ်။ " အဲဒီကောက်ချက်ချ
"လေ့လာရေးညစ်ညမ်းကသူတို့ဘဝနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်သည်ကိုသူတို့ကြည့်ရှုစီမံခန့်ခွဲဖို့မထင်နိုင်ပါတယ်ရှိရာအချက်တစ်ခုစွဲလမ်းအရည်အသွေးပေါ်ယူပြီးအားနည်းချက်ပါလိမ့်မယ်သူအချို့လူတွေကအဲဒီမှာဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြု," ကျန်းမာရေးနှင့်တိုင်ပင်န်ဆောင်မှုများ၏အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာကပြောပါတယ် နေရာမှာဂုယော်ဒန်မြစ်။
ညစ်ညမ်း၏ခေါင်းစဉ်သုတေသနပြုခြင်းနှင့်လိင်ကွဲပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဟုခေါ်သောပထမဦးဆုံးနှစ်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲသွန်သင်ခဲ့သူစပိန် Juana Gamero က de Coca ၏လက်ထောက်ပါမောက္ခ, အဆိုအရ, ဒီနေ့ရဲ့ညစ်ညမ်းကပင် 15 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်ထက်သိသိသာသာပိုပြီး "ခက်-Core" ဖြစ်ပါတယ်။
"babyish တစ်နည်းနည်းနဲ့တစ်ဦးကန့်သတ်မှုကိုဖြတ်ကူးအပေါ်အခြေခံသည်" Gamero က de Coca ကဆိုသည်။ "ဒါဟာခေါ်ဆောင်သွားစိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်အတူလူတွေလုပ်ကြနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ် ... Porn [မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း] ကိုပိုကောက်သော, ပိုမိုအကြမ်းဖက်ဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါ 20th ရာစုအစအဦးကဲ့သို့ဝတ္ထုမှာ Madame Bovary နှင့် သမ္မတကတော် Chatterley ရဲ့ Lover သူတို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြသောကြောင့်, တရားမဝင်ခဲ့ကြသည် '' ညစ်ညမ်း။ '
"ကျနော်တို့ကအဆုံးသတ်မည်ကိုသိသကဲ့သို့ငါကြောင့်ညစ်ညမ်းထင်ပါတယ်" ဟုသူကဆက်ပြောသည်။ "ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်း, မုဒိမ်းမှုနှင့်ကလေးဗလက္ပုံမှန်ဖြစ်လာနေကြတယ်။ "
Gamero က de Coca နှင့်အခြားပညာရှင်များအဆိုအရလမ်းကြောင်းသစ်အသုံးပြုသူများကိုသာသက်ရောက်: အရသာသူတို့ယခင်ကသူတို့ကိုနှိုးဆော်ခြင်းအရာကိုပုံမှန်ဖြစ်လာအဖြစ်ပိုပြီးအစွန်းရောက်ဖြစ်ပြောင်းပေးပါ။
အဆိုပါ ပရဝုတ် လူမှုရေးဂယက်ရိုက်ကြောက်ရွံ့သောကျောင်းသားများကိုများ၏အမည်များထိမ်ချန်ထားသည်။
"အစအဦး၌အမြဲဓာတ်ပုံများကိုခဲ့," အထီးပထမဦးဆုံးနှစ်ဟုပြောသည်။ "အခုကအင်တာနက်ပေါ်ရှိဗီဒီယိုများဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မရှေ့မှာစိုက်ထူဖို့ပိုမိုလွယ်ကူခဲ့ပုံပါဘဲ။ "
ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအခြားသူတစ်ဦးနှင့်အတူပုဂ္ဂလိကယှငျးထံမှကွာရှင်းကျောင်းသားများကို '' porn-မှုတ်သွင်းစိတ်ကူးယဉ်ရှေ့ဆက်လိမ့်မည်။
"အများသောသူတို့ကလိင်အမြဲညစ်ညမ်းပေးမျှော်လင့်ချက်မှတက်မရှငျပါဘူး," Peluso ကဆိုသည်။ "သူတို့ကအစစ်အမှန်အရာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသည့်အခါထိုကွောငျ့, [ယောက်ျား] လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများတွေ့ကြုံခံစားပေလိမ့်မည်။ "
နောက်ထပ်အထီးပထမဦးဆုံးအနှစ်သူ porn မှအစစ်အမှန်လိင်နှိုင်းယှဉ်ကပြောသည်။
"ငါသည် porn အတွက်အမှုအရာမြင်သူတို့ကိုစမ်းချင်ပါ" ဟုသူကဆိုသည်။ "ဒါပေမယ့်ငါ porn အတွက်မိန်းကလေးတွေကိုမှအတူငါအိပ်လို့မိန်းကလေးများမနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့။ "
"ယောက်ျားလေးနှင့်အတူလိင်အကြောင်းပြောနေတာတဲ့အခါမှာဆက်သွယ်ရေး၏တံခါးပိတ်လိုင်းရှိပါတယ်" ဟုအမျိုးသမီး sophomore ကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကို၏ဒါအများကြီးကျနော်တို့ယောက်ျားတွေချင်ထင်သောအရာကိုအပေါ်အခြေခံသည်ကိုငါတို့သည်သူတို့ porn အတွက်စောင့်ကြည့်ထင်သောအရာကို, ဒါပေမယ့်သင်သိဘူး။ "
Gamero က de Coca ယောက်ျားလေးများညစ်ညမ်းကိုးဖြစ်ပါတယ်သုံးစွဲဖို့စတင်မှာပျမ်းမျှအားဖြင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အသက်အရွယ်ပြသတဲ့မကြာသေးမီလေ့လာမှုထောက်ပြသည်။
"ဒါဟာအလွန်ကြောက်စရာဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။ "သူတို့လိင်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူဖြစ်ကြောင်းအားလုံးသတင်းအချက်အလက် - တိုင်းယောက်ျားလေးနှင့်မိန်းကလေးတစ်ဦးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဘာသာရပ် - မီဒီယာနှင့်ညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုကျွေးမွေးနေပါသည်။ "
ကောလိပ်မှာအတော်များများအထီး (နှင့်အမျိုးသမီး) ကျောင်းသားများကိုသူတို့လိင်ကြုံတွေ့ခဲ့မတိုင်မီညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးလျှင်ဝန်ခံ။
"ကျွန်မပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့လိင်ခဲ့ရှေ့၌ငါ porn အများကြီးစောင့်ကြည့်" လို့အထီးပထမဦးဆုံးနှစ်ဟုပြောသည်။
အချို့သောကျောင်းသားများ porn နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြား link ကိုအကြောင်းကိုသံသယရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
"arousal မဆိုတိကျတဲ့ mode ကိုအသုံးပြုလေ့ဖြစ်လာခြင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လျော့နည်းခေါ်ဆောင်သွားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဆပ်နိုင်ပေမယ့်ညစ်ညမ်းလှဲမှားသောဖြစ်ပါတယ် vilify ဖို့," ကို Claire Sibley '' 13 ကဆိုသည်။ "ငါသည်လုသောငါတို့ကျောင်းဝင်းနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ဖြစ်ပါတယ်ကိစ္စကိုရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချဘူး။ ဒါဟာကျနော်တို့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းအကြောင်းပြောနေတာနေပြောနေရဲ့ - အားလုံးပြီးနောက်, အသွင်မြင်လာအောင်ယောက်ျား porn watch ဆိုထားသည်။
အမြိုးသမီးမြား၏အမှု၌လျော့နည်းသိသာပေမယ့်နည်းတူအစစ်အမှန် - "အဘယ်သို့ငါသံသယလျစ်လျူရှုခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ယေဘုယျအားဖြင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုပြဿနာကိုတကယ် porn ဖြစ်လျှင်, ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည် - porn မပါဘဲ masturbating စမ်းပါ။ ကြောင်းအလုပ်လုပ်မပါဘူးဆိုရင်, တချို့သည်အိပ်ပျော်ရနှင့်သင့်စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချပေးပါတယ်။ "
ယောက်ျားကိုလည်း "ကွန်ဒုံးပြိုကျ syndrome ရောဂါ," သို့မဟုတ်ကွန်ဒုံးတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါတစ်ခုစိုက်ထူထိန်းသိမ်းရန်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ Foresta ရဲ့အီတလီသုတေသနအဖွဲ့လည်းညစ်ညမ်း-သြဇာလွှမ်းမိုးမှု erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုအတွက်ကျဆင်းမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
"ကွန်ဒုံးကျိန်းသေ desensitizing နေကြသည်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲပြဿနာကိုမကူညီလိမ့်မယ်" ဟု Peluso ကဆိုသည်။ "တစ်လမ်း, သင်နှစ်ကြိမ် desensitized လျက်ရှိသည်။ "
"ငါသည်တစ်ခါတစ်ရံယောက်ျားသူတို့အနေနဲ့စိုက်ထူရှိသည်သို့မဟုတ်ရေရှည်တည်တံ့မနိုင်ဘာဖြစ်လို့ [များအတွက်] အနေနဲ့ဆင်ခြေအဖြစ် [ကွန်ဒုံး] အသုံးပြုထင်ပါတယ်" Kelliher ကဆိုသည်။ "သို့သော် ပို. မကြာခဏမထက်အဖြစ်ကောင်းစွာပေါ်မယ့်အချို့ညစ်ညမ်းကြည့်ရှိ၏။ "
ကွန်ဒုံး-ပြိုကျ syndrome ရောဂါအန္တရာယ်များအပြုအမူဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင် - ချက်ချင်းလိင်ဆက်ဆံ၏မျက်နှာသာအတွက်လုံးဝကာကွယ်စောင့်ရှောက်အထက်ပါဖို့ရွေးချယ်စေခြင်းငှါ, ကွန်ဒုံးနဲ့စိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အဲဒီလူရဲ့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကိုမကျေနပ်သောကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်။
Kelliher 2005 န်းကျင်ကတည်းက Plan B ဝယ်လိုအားအတွက်ကြီးမားတဲ့တိုးမြင်ကြပြီမှဆိုပါတယ်။ သူမလည်းယခင်ကထက်အတိတ်ငါးနှစ်အတွင်းလိင်အင်္ဂါရေယုန်ပိုမိုဖြစ်ပွားမှုမြင်ကြပြီမှဆိုပါတယ်။ လိင်အင်္ဂါရေယုန်အဘို့စမ်းသပ်, $ 110 မှာစျေးအကြီးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ transmit ရောဂါကူးစက်စမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
"ဒါဟာ [အဆိုပါ porn] စက်မှုလုပ်ငန်းကွာသင့်ရဲ့မျိုးဆက်ကနေဒါရိုးရှင်းပြီးအခြေခံတစ်ခုခုယူတော်မူကြောင်းကိုကြည့်ဖို့ဝမ်းနည်းဖြစ်ပါတယ်" ဟု Kelliher ကဆိုသည်။ "ဒီကလေးတွေကိုသင့်ရဲ့အသက်အရွယ်အဘို့ပြဿနာတစ်ခုမဖြစ်သင့်ပါတယ်။ မျှော်လင့်ကျနော်တို့ကပိုကအကြောင်းပြောနေတာစတင်ကပိုအဆင်ပြေသူတို့တစ်တွေပြဿနာရှိပါကကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်လာရန်အဘို့အစေနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ပြီးတော့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်နှင့်ကြှနျုပျတို့သညျဤမှတဆင့်သူတို့ကိုရနိုင်တယ်။ "
Peluso, ဂျော်ဒန်နဲ့ Kelliher Parton ကနျြးမာရေးစင်တာ၌ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်အကူအညီရှာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုခံစားနေရပြီးသူကျောင်းသားများအတွက်တိုက်တွန်းပါသည်။